Izinhlelo Zosawoti Chlorinator, Izinto Zokubhukuda - amaBlueworks
Izingxenye & Izesekeli
Uhlelo Lwamanzi Amasha
Ukuqamba okusha kanye ne-sanitizer yesizukulwane esilandelayo ephelele echibini, akuhlukile kulokho okuphuma kumpompi wakho wasendlini. Uchwepheshe futhi unolwazi ngohlelo lwamanzi ahlanzekile.
Ayisaxubene negesi ketshezi noma ithebhulethi ye-chlorine, elinganisiwe noma engcolisiwe. Manje, ama-blueworks ekunikeza izixazululo zokubulala amagciwane, ungathola ngokuzenzakalela amanzi ahlanzekile, athambile futhi aphephe kakhulu. Sinohlelo lwe-salt chlorinator kanye ne-ionizer futhi ku-ozone yesikhathi esizayo ukunikela ngokugcina ngekhwalithi yamanzi.
Onjiniyela base-US, abavunyelwe yi-Energy Star, ochwepheshe ekwakheni izinjini zamaphampu nabashayeli, iBlueworks ilapha ukuzokunikeza okufunayo ngamaphampu akho.
Ukusekela uhlelo lwakho lwe-chlorinator olusebenza ngokukhululeka ukuze lube nekhwalithi yamanzi amsulwa, ahlanzekile, iBlueworks inezinhlobonhlobo zokufakwa esikhundleni kwamaseli. Zithembekile futhi zihlala isikhathi eside njengoba sakha iminyaka engaphezu kwengu-16.
IBlueworks inamaphampu wejubane ahlukahlukene ahlukahlukene neCalifornia Energy Star Approval kanye ne-ETL, iCanda CSA Approval eqinisekisa ukuthi uzoba nepompo elifanele ledamu lakho. Iphampu yephuli ye-VSP izovame kakhulu emakethe yase-US njengoba isebenza kahle kakhulu ukonga amandla.
IBlueworks SPP1515VS Pool Pump
Uhlelo Lokubhukuda Amanzi anosawoti i-BLSC
Usawoti I-chlorinator BLPT
IBlueworks IGP2115VS Iphampu Yejubane Eguquguqukayo
I-Blueworks AGP1515VS Ipompo Yejubane Eguquguqukayo
I-Blueworks Vsm Premium Efficiency Speed ​​Variable ...
Ama-Blueworks Solar Robotic Pool Acashile
IBLUEWORKS CORPORATION igxile ekwakheni nasekukhiqizeni uhla olubanzi lwezinto zokubhukuda. Njengomkhiqizi oholayo, sibeka igatsha e-NC, e-USA ngemuva kwensizakalo yokuthengisa. Ngemuva kweminyaka eyishumi yokwandiswa, sikhule saba ngomunye wabaphakeli bezinto zokubhukuda ezibalulekile e-USA.
Imikhiqizo ifaka, i-Salt Chlorinator, i-Salt Chlorinator Cell Replacement, i-Saltwater System Parts, i-Pool Light, i-Pool Alarm, i-Pool Timer, i-Pool Pump njalonjalo.
Ngokusho Kwe-Cdc Abukho Ubufakazi Bokuthi I-Covid-19 Ingasatshalaliswa Kubantu Ngokusebenzisa Amachibi Namabhubhisi Ashisayo. Ukusebenza okulungile, ukugcinwa kanye nokubulawa magciwane kwamachibi okubhukuda namabhubhisi ashisayo (Isibonelo, Ukubulala Amagciwane Nge-Chlorine Ne-Ionizer) Kufanele Kususe Noma Kungasebenzi Amagciwane Abangela I-Covid-19.
Sisebenza Ngokujwayelekile Ukunikeza Amamodeli Wakho.
Izinsuku eziyi-6 ngesonto, kusukela ngo-8: 30 ekuseni kuya ku-4: 30 ntambama